Wasaaradda Arrimaha Gudaha oo dib u eegis ku samayneysa mashruuca hormarinta degmooyinka JPLG – Wasaaradda Arrimaha Gudaha oo dib u eegis ku samayneysa mashruuca hormarinta degmooyinka JPLG – Ministry of Interior, Local Government & Rural Development
by Ministry of Interior · 11th July 2017
Wasaaradda Arrimaha Gudaha D/Hoose iyo HRM ayaa waxay Sanad walba waxay qabataa Shirka Dib-u-eegista Mashaariicda JPLG ee ka socda qaar ka mid ah Degmooyinka Puntland.
Shirkaan oo muhiimadsiisu tahay sidii dib loogu eegi lahaa Sanadkii lasoo dhaafay Wixii ka qabsoomay Degmooyinka u ka socdo Mashruuca JPLG, wixii aan qabsooomin iyo Caqabadaha jira.
Mashruucan oo ah mid lagu najaxay ayaa Hadda wuxuu marayaa Heer gabogabo ah waxaana mudadii u socday laga faaiiday waxyaalo badan oo ay ugu horreeyaan Kaabayaasha Dhaqaalaha sida Waddooyin Muhiim ah .
Madaxweyne ku xigeenka Dawladda Puntland Eng. Cabdixakiim Xaaji Cabdullaahi Cumar Camey ayaa u daah-furay shirweynaha dib u eegista mashruuca horumarinta degmooyinka Puntland ee JPLG.
UNCDF launches a local revenue mobilization initiative in Puntland, Somalia
wafti Ka socday Hay’adda WFP oo kasoo degey Magaalada Qardho
Next story Monthly Mixed Migration Updates (January – May 2017)
Previous story Wasaaradda oo maalgelin ganacsi u sameysay 200 oo Yemeniyiin qaxooti ah